Wasiir ka socda Denmark oo Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir ka socda Denmark oo Muqdisho kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya
12th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa ay garoonka Aadan Cadde ku qaabileen wafdi ka socday dowladda Denmark, oo uu hogaaminayay wasiirka ganacsiga iyo horumarinta Mr. Mogens Jensen.
Kulanka ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labada dowladood iyo qorshaha ku saabsan shirka Hiigsiga cusub ee New Deal oo 19-ka bisha November lagu qaban doono magaalada Copenhagen ee xarunta dalka Denmark.
Markii ay kulammadu soo dhammaadeen ayaa waxaa shir jaraa’id si wadajir ah u qabtay wasiirka arrimaha dibadda Somalia, C/raxmaan Ducaale Bayle iyo wasiirka ganacsiga iyo horumarinta Denkar, Mogens Jensen.
C/raxmaan Bayle ayaa sheegay in wafdiga Denmark ka socda ay kawada hadleen horumarinta, dib u dhiska dalka, taageerida hay’adaha dowladda iyo u gogol xaaridda shir lagu qaban doono bisha November ee nagu soo foolka leh magaalada Copenhagen ee xarunta Denmark.
Wasiirku wuxuu sheegay in kulanka uu ku dhammaaday natiijo wax ku ool u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isagoo bogaadiyay xiriirka Somalia kala dhaxeeya Denmark.
Dhankiisa, Mogens Jensen ayaa sheegay in imaanshihiisa Muqdisho uu yahay tusaale cad oo la xiriira taageerada siyaasadeed ee dowladdiisu u heyso dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo sheegay inuu la dhacsan yahay is-bedellada iyo horumarrada dowladdu sameynayso.
Morgens ayaa xusay in mas’uuliyiinta dowladda Somalia uu kala tashaday dib u dhiska, horumarinta, fursado shaqo oo la abuuro, gargaarrada bani’aadamnimo iyo qodobbo kale, isagoo ku sheegay in kulammada uu la yeeshay madaxda dowladda ay ahaayeen kuwo miro-dhal ah.
Wasiir Dhuxulow: Soomaalidu waa iney garab qabtaan dhalinyarada